ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"
26 jolay 2021
(natao tao Mahajanga,ny 24 ,25, 26 jolay 2021 lasa teo)
"-Manohy sy dingana efa vitany sy manatevina ny fikarohana efa nataony mahakasika ny ala honko ireo mpikaroka Malagasy".
Maro ireo mpikaroka nandray anjara tamin’ity hetsika iraisam-pirenena ity.Isan’ireny ny mpikaroka avy ao amin’ny " Centre National de Recherche Océanographique" CNRO, izay eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. Niara-dalana tamin’ny tantaram-piorenan’ity ivon-toeram-pikarohana ity ny fikarohana momba ny ala honko. Nambaran’ny Talen’ny CNRO RAJAONARIVELO Mamy Nirina fa efa nanomboka tamin’ny taona 1980 tany hoany izany ary mbola mitohy mandrak’ankehitriny.
Fantatra mantsy fa misy karazany 8 ny honko eto Madagasikara, ka ny honko manodidina an’ny Nosy be antampon-tanàna, Ambanja sy ny faritra andrefan’i Madagasikara izay ahitana ny 89 % ny alahonko no toerana iasan’ny CNRO.
Manana anjara asa maro ny honko ary ilaina amin’ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra ireo hazandranomasina. Voalazan’ny Mpikaroka fa mitroka ny "carbone" maloto ary mamokatra entona mamelona "oxygène" amin’ny toerana ipetrahan’ny drakaka"crabe" sy fanatavizana azy ny honko, sady miaro ny zanaka makamba mba tsy ho ringana ary mihazona ny tanety tsy hikoa amin’ny fiakarana sy fidinan’ny ranomasina ihany .
Fifanekena nosoniavina tany Nairobi (convention de Nairobi) :
Nosoniavina tamin’ny 2017 ny "convention de Nairobi" izay tetikasa fanarenana ny ala honko. Isan’ny mandray anajara amin’izany ny CNRO . Natomboka ny volana Novambra 2020 ny asa fanatanterahana azy izay iarahan’ny Ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy miasa. Nanomboka tamin’ny desambra 2020 dia nahavita namboly honko amin’ny velarana 20 hekitara mahery ny CNRO, fambolena honko izay nampiasana sy nampiharana ny voka-pikarohana natao ka nijerena an-tsimpiriany ny karazana hazo izay mety amin’ny tany volena, sy ny fomba fambolena azy satria nisy ny natsatoka ary nisy ny nafafy. Ho fiarovana azy dia nomena andraikitra ireo vondron’olona ifotony ( VOI, ireo mpanjono) mba ahafahana manatsara sy manara-maso ny voly. Nomena tosika izy ireo amin’ny fidiram-bolany ao an-tokantrano sy ny fihariana fameloman-tenany.Vokatra azo avaozina mantsy ny honko ary miantoka ny fampandrosoana maharitra.
Ny anjara toeran’ny mpikaroka :
Ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ala honko izay notanterahana tany Mahajanga no nahafahana namolavola paikady hanomezana lanja sy hiarovana ny ala honko eto Madagasikara mba hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena.Toy ny sehatra asa fampandrosoana rehetra dia manana anjara toerana lehibe ny Mpikaroka hoy ny Tale Jeneralin’ny Fikarohana Ara-tsiansa ny Profesora RAMANANKIERANA Heriniaina. Niainga avy amin’ny fikarohana nataon’ny mpikaroka ny famolavolana,ny fanatanterahana ary mipàka hatrany amin’ny fanaraha-maso(suivi).Ny fiarovana sy fanarenana ary fanomezan-danja ny ala honko dia fikarohana avokoa no ahafahana mamantatra ny olana sy mbola manome ny vahaolana.
Tsy afa-misaraka amin’ny asa fampandrosoana tian-katao ny asa Fikarohana. Manana ny vitrika hoenti-miatrika izay andrasana aminy ny mpikaroka Malagasy, indrindra amin’izao vanim-potoana irosoan’ny firenena amin’ny fanomezan-danja aman-kasina ny voka-pikarohana Malagasy izao, ka isian’ny ainga vao nofaritan’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa izay tarihin’ny Minisitra ny Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice.